Ithegi: ukuthengiswa kweeholide | Martech Zone
Ithegi: ukuthengiswa kweeholide
Kunyaka ophelileyo, 1 kubathengi aba-5 BONKE bathenga ngeKrisimesi kwi-Intanethi! Yikes… kwaye kuqikelelwa ukuba kulo nyaka, isinye kwisithathu sabo bonke abathengi kwi-Intanethi baya kwenza ukuthenga kwabo nge-smartphone okanye ithebhulethi yabo. Iipesenti ezingama-44 zithengisa kwithebhulethi kwaye phantse wonke umntu usebenzisa idesktop yakhe ukuthenga. Ukwimeko embi kulo nyaka ukuba awuzilungiselelanga iisayithi zakho kunye nee-imeyile kubathengi beeselfowuni kunye neetafile- kodwa akukaze kube lixesha kakhulu
NgoLwesithathu, Oktobha 30, 2013 Lwesine, Okthobha 31, 2013 Douglas Karr
Siyazi ukuba ayingoNovemba, kodwa iiholide zisondela ngokukhawuleza kubathengisi. Ukukunceda ukuba uthengise ngeholide yakho ngegiya, i-Offerpop idibanise le Holographic Panic infographic nazo zonke iiholide ezihambayo kunye nezentlalo oza kudibana nazo ngeli xesha lonyaka. Phantse isiqingatha sabo bonke abathengi baya kusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukufumana izimvo ezizodwa zezipho kunye nezahlulo zeholide ezayo. Sele usiqulunqile isicwangciso seholide okwangoku? Ngaba uyibandakanyile intlalo